OpenShot 2.6.0: Yakaburitswa ine hombe nyowani maficha | Linux Vakapindwa muropa
OpenShot 2.6.0: Yakaburitswa neHuru Zvitsva Zvimiro
OpenShot 2.6.0 Yakatoburitswa kare, uye inounza kuvandudzwa kwakawanda zvekuti zvinoshamisa kuti ivo vanogadzira vakakwanisa kuita zvakawanda kugadzirisa iyi yemahara uye yakavhurika sosi vhidhiyo mupepeti. Iye zvino unogona kushandisa iyi software kugadzira marudzi ese ehurongwa uye vhidhiyo zvisikwa mune imwe nzira yehunyanzvi, uye uine shanje kune vamwe varidzi uye vanobhadharwa vapepeti.
Zvinosimudzirwa zvinoonekwa muOpenShot 2.6.0 zvinosanganisira iyo nyowani chiratidzo chekunyepedzera uye njere dzekunyepedzera. Navo unogona kuona zvinhu, kudzikamisa mufananidzo, kutevera mafambiro, nezvimwe. Wakawedzera odhiyo mhedzisiro senge EQ, marobhoti mhedzisiro, maungira, ruzha, kunonoka, kukanganisa, expander, compressor, uye zevezeve zvakare kumira.
Uye kana izvo zvisina kukwana, OpenShot 2.6.0 yakawedzerawo a nyowani yekudzora widget Zoom inotsvedza kufamba nenzira yenguva zviri nyore. Iwe zvakare uchave neyekushandura chishandiso kushandura saizi, kutenderera, kufambisa, kucheka, kuyera, kuswededza mukati kana kunze, uye kutara poindi yekwatangira. Iko kugadzirisa kwagadziridzwa, kune kwakanyanya kunyatsoita mumusoro wekubereka, kutema uye kumisikidza.
Iye zvino iwe zvakare uchave nemhedzisiro ye raster subtitle vhidhiyo pamusoro, kuenderana neFFmpeg 4, Yakagadziridzwa WebEngine + WebKit uye Blender, inobereka kiyi mafirati, mashandiro uye kugadzikana kusimudzira panguva yekudhirowa, nguva yekumisikidza uye kupa. Uye yakareba kwazvo.
Uye ndeyekuti OpenShot 2.6.0 iri zvinopfuura kugadzirisa, iine hombe uye inotyisa pasuru yezvinhu zvitsva izvo zvave kuita kuti itore mushe mushe muhunhu. Kana iwe usingatendi mazviri, heano dzimwe nhau dzinonakidza:
Kugadziriswa kwezvikanganiso nezwi uye mamwe matambudziko eiyo yapfuura vhezheni.
Kugadziridza kweCPU uye kushandiswa kwetambo.
OpenMoji yakave yakabatanidzwa kuti ive raibhurari yeinenge 1000 emojis yekuwedzera kune ako mavhidhiyo kana eakajeka mifananidzo.
Kwidziridzwa kuCloud REST API, inowanikwa muAzure neAWS. Nayo unogona kugadzira mavhidhiyo akasarudzika kuburikidza nezvikumbiro zviri nyore zveHTTP.
ChromeOS uye AppImagen inoenderana kuvandudzwa kwevakuru Linux distros.
Nyowani yekuvaka maseva eMac, Windows uye Linux kuvandudza mashandiro.
Dzimwe nzira dzakatovandudzwa kuita kuti basa rekuvandudza rive nyore uye nekuburitsa OpenShot zvinowedzera kazhinji.
Kuzivisa kweBug kwakagadziridzwa zvakare.
Shanduro dziri nani.
Uye zvakawanda, zvimwe zvakawanda ...
Mamwe ruzivo uye kurodha pasi OpenShot - Yepamutemo Webhu
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » OpenShot 2.6.0: Yakaburitswa neHuru Zvitsva Zvimiro
FarmBot Genesisi: Vhura-Chitubu mumunda wako
Guta Game Studio: guta manejimendi vhidhiyo mutambo